English Lab: ဤ Show-Ring Labrador ပြန်လည်ရယူရန်လမ်းညွှန် - Breeds
English Lab: ဤ Show-Ring Labrador ပြန်လည်ရယူရန်လမ်းညွှန်
Labrador Retriever သည်အမေရိကတွင် ၂၉ နှစ်ကြာအကျော်ကြားဆုံးသောမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကအင်္ဂလိပ် Lab နှင့်“ American” Labrador ဟူသောဝေါဟာရများသည်ခွေးကွန်ရက်များတွင်ပိုမိုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ။
ဒါပေမယ့်ဒီခွေးနှစ်ကောင်ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ သူတို့အတူတူဖောက်လား? အင်္ဂလိပ် Labrador ဖြစ်တာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ထိုမေးခွန်း (နှင့်အခြားသူများစွာ) ကိုဖြေဆိုရန်၊ ဒီမျိုးဆက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဆက်ဖတ်ပါ။
အင်္ဂလိပ် Lab ကခွေးပေါက်စ
အင်္ဂလိပ် Labrador Temperament
Labrador ဟူသောဝေါဟာရကို ၁၉ ရာစုအကုန်တွင်အင်္ဂလန်၌ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မူလကစိန့်ဂျွန်ရဲ့ခွေးကိုခေါ် သို့မဟုတ်အသေးငယ်ဆုံးနယူးဖောင်လန်ကို၎င်းခွေးများအားကနေဒါမှအင်္ဂလန်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ထိုတွင်ငါးဖမ်းသူများကပိုက်ကွန်ကိုဆွဲတင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဗြိတိန်တွင်ချက်ချင်းရေပန်းစားသည်။ သူတို့က 1903 ခုနှစ်, ခွေးဂေဟာကလပ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည် နှင့် 1917 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ခွေးဂေဟာကလပ်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ဤခွေးများကိုသေနတ်ဖြင့်ချိန်။ (သို့မဟုတ်သင်္ဘောကျင်းတွင်ပိုက်ကွန်ထဲဆွဲယူခြင်း) ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ အစား၊ သူတို့၏မိသားစုများနှင့်လယ်ကွင်းများသို့ဖြတ်ကျော်သွားသောလူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းသူတစ် ဦး အားအကူအညီအဖြစ်ကူညီခြင်း ခွေး!
English Lab နှင့် American Labrador - ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်၊ Labradors များသည်အလုပ်လုပ်သောလိုင်းများမှဆင်းသက်လာသည်ကိုအမေရိကန် Labradors များဟုနားလည်ကြသည်။ Labrador များကိုပြသမည့်လက်စွပ်အတွက်မွေးမြူသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်အင်္ဂလိပ် Labrador Retrievers ဟုခေါ်ကြသည်။
အလုပ်လုပ်သွေးကြောများ USA တွင်ပိုမိုအဖြစ်များကြသည်
နေသော်လည်း အဆိုပါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကွဲပြားခြားနားမှု (အောက်တွင်ဆွေးနွေးထားပါသည်), သူတို့ကတူညီတဲ့ဖောက်ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။
ဤဝေါဟာရများသည်တင်းကြပ်သောအမျိုးအစားများမဟုတ်ပါ၊ အစားသူတို့က Labrador ၏သွေးကြောများကိုဖော်ပြရန်ပိုမိုအသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။
အရွယ်အစား ၂၁.၅ လက်မမှ ၂၁.၅ လက်မ
အလေးချိန် ၇၀ မှ ၈၀ ပေါင် (အထီး) နှင့် ၆၀ မှ ၇၀ ပေါင် (အမျိုးသမီးများ)
သက်တမ်း 10 မှ 12 နှစ်
မျိုးကွဲအမျိုးအစား Gundog အုပ်စု
အရောင် ရွှေ၊ ချောကလက်၊ အနက်ရောင်၊ ငွေရောင်
အပူချိန် ဖော်ရွေမှု၊ သစ္စာစောင့်သိမှု၊ ဂရုစိုက်မှု၊
အခြားအမည်များ အင်္ဂလိပ် Labrador Retriever
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အမှိုက်သရိုက်များထဲတွင်ခွေးပေါက်စကလေးရှစ်ကောင်ရှိသည်။ သို့သော်အရေအတွက်ခြောက်လမှ ၁၂ ခုအတွင်းကွဲပြားနိုင်သည်။
လူကြိုက်များသောကြောင့်အင်္ဂလိပ် Lab မှခွေးပေါက်စများသည်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၆၀၀ မှ ၁၂၀၀ ကြားကြားရှိသည်။
ရှစ်ပတ်ကြာသောအခါ ( သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်စေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ ကောင်းတဲ့လူမှုရေးခွေးကလေးတစ်ယောက်ကိုသူတို့မြင်ကွင်းတွေ၊ အသံတွေ၊ အနံ့တွေအများကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဤသေးငယ်သော pooches များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုအသေးစိတ်ခန့်မှန်းခြေတိုးတက်မှုနှုန်းဇယားသည်။
အကယ်၍ သင်၏ခွေးသည်အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်အဝလွန်နေလျှင်၎င်းသည်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအပြည့်အဝအတွက် veterin များသို့သွားရန်အာမခံချက်ပေးလိမ့်မည်။
ဤဖောက်သည်သည်ခွေးများနှင့်လူများအပေါ်မတုံ့ပြန်သည့်အပြင်သူစိမ်းတစ် ဦး ထံမှချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
အင်္ဂလိပ် Labrador ဆိုတာမသိရပါဘူး အထူးသဖြင့် Barky ခွေး ယင်းအစားသူတို့သည်ပိုင်ရှင်ကိုထူးဆန်းသောဆူညံသံသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူသစ်ကိုသတိပေးရန်သာဟောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသည်ဖောက်မကြာခဏသူတို့ရဲ့ကျူးကျော်များ၏အဆင့်နိမ့်မှုအတွက်မှတ်ချက်ပြုသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောစောင့်ရှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွေးများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဟုမသိရပါ။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ကျူးကျော်သူများကိုထိတ်လန့်စေမည့်သူထက် ပိုမို၍ ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
လူသိများသည် သူတို့ရဲ့သစ္စာစောင့်သိနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံသဘာဝအဘို့ ဤသည်ကရံဖန်ရံခါသူတို့ကိုခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ရုန်းကန်နေစေနိုင်သည်
အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းအတွက်လေ့ကျင့်မှုကိုစတင်သင့်သည် အဖြစ်မကြာမီခွေးကလေးအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်အတိုင်း , သင့်ခွေးကလေးကိုအလွန်တိုတောင်းသောကာလ (1 မိနစ်ထက်မပို) များအတွက်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာခြင်းဖြင့်။
Labrador ပြန်လည်ရယူခြင်းသည်သူတို့၏ပင်ကိုစရိုက်၊ ချစ်ခင်မှုနှင့်ချစ်မြတ်နိုးမှုသဘောသဘာဝကြောင့်ကမ္ဘာကျော်သည်။
English Labs များသည်သူတို့၏ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက်ထင်ရှားသည်။
သို့သော်စွမ်းအင်မရှိခြင်းကြောင့်မှားယွင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။ ဤခွေးများသည်နေ့စဉ် zoomies များကိုရရှိပြီးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာလိုအပ်သည်။
မင်းတို့ကသူတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဆက်လက်စောင့်ရှောက်ပြီးသူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာပေးနိုင်ရင် ဤကြင်နာသောနှလုံးခွေး လူတန်းစားအမျိုးမျိုးမှလူများအတွက်သင့်တော်သည်။
English Labs သည်မိသားစုခွေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။
ငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်မိတ်ဆက်ပါကသူတို့သည်သင့်မိသားစုရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်အခြားခွေးများ၊ ကြောင်များ၊ ယုန်များသို့မဟုတ်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်လည်းကောင်းကောင်းနေနိုင်သည်။
အစအ ဦး ၌နိဒါန်းကြီးကြပ်ရန်သေချာစေပါ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှစ်ခုလုံးသင့်လျော်စွာပြုမူနေကြောင်းသေချာစေရန် နှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်။
အင်္ဂလိပ် Labrador Retrievers ပေမယ့် သူတို့ရဲ့စိတ်ရှည်မှုအတွက်လူသိများသည်။ ခွေးများအားလုံးသည်ကွဲအက်သည့်အချက်ရှိသည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။
ဒီပေါက်ကွဲမှုမှာခန္ဓာကိုယ်၊ စိုပြေသောခြေထောက်များ၊ ကြင်နာသောမျက်လုံးများနှင့်အလတ်စားခေါက်နားရွက်များကဲ့သို့စည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဖောက်မှတ်ချက်ချသည် သူတို့ရဲ့ 'otters အမြီး' အဖြစ်ဖော်ပြထားသောအရာကိုအဘို့ အလျားအလျားရှည်ပြီးထူထဲသောအမြီးကိုမူလက ၄ င်းတို့ကိုရေကဲ့သို့တွန်းတင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
American Labradors များသည်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည် (၂၁.၅ မှ ၂၄.၅ လက်မ) ရှိသော်လည်းအင်္ဂလိပ် Labs တွင်အမြင့်ပေ ၂၁.၅ မှ ၂၂.၅ လက်မအမြင့်တွင်တည်ရှိသည်။
အလေးချိန်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည် ၆၀ မှ ၇၀ ပေါင်ကြားအနည်းငယ်သာရှိပြီးယောက်ျားလေးများသည် ၇၀ မှ ၈၀ ပေါင်ကြားရှိသည်။
ဒီဖောက်သည်အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အရောင်များ, အဆိုပါ AKC စံနှုန်း နေသော
English Lab သည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောတိုတို၊ ခိုင်မာသော၊ သိပ်သည်းသောကုတ်အင်္ကျီများဖြင့်အလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်သည်။
English Labs များသည်အလွန်မြင့်မားသောသွန်းလောင်းသောမျိုးဖြစ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းတို့သည်မသင့်တော်ပါ ခွေးဓာတ်မတည်နှင့်အတူလူတို့အဘို့ ။
ဤခွေးများသည်အလွန်ထိလွယ်သောအသားအရေရှိသည်ဟုလူသိများသောကြောင့်အလွန်လိုအပ်သောအချိန်တွင်သာရေချိုးရန်ကြိုးစားပါ။ ရေချိုးချိန်မှာ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသုံးပါ မည်သည့်အဆင်မပြေကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားရန်။
အခြားဝတ်ရည်နှင့်မတူဘဲ , Labs က '' အင်္ကျီကိုချွတ်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်၊ သူတို့သည်ပုံမှန်နားစစ်ဆေးမှုများလိုအပ်ပြီးလက်သည်းများကိုပုံမှန်ပြုပြင်ကြသည်။
English Labrador ပြန်လည်ထုတ်ယူသူများသည်ကျယ်ဝန်းပြီးကျယ်ဝန်းသည့်နေရာများတွင် (အကောင်းဆုံးသောဥယျာဉ်တစ်ခုတွင်) အကောင်းဆုံးလုပ်သည်။
လမ်းညွှန် ၁၀၀၀ ကယ်လိုရီ
အလုပ်လက်မဲ့ အလွန် unfussy စားဖြစ်လူသိများကြသည် အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ထိမှန်ပါကသင်၏အင်္ဂလိပ် Labrador သည်သင်ပြိုကျသွားသည်ကိုပင်မမြင်တွေ့မှီသင်တို့၏အင်္ဂလိပ် Labrador သည်ယင်းကိုမျိုချလိုက်လိမ့်မည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဤခွေးသည်နေ့စဉ် ၂.၅ ခွက် / အစားအစာစားရန်လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ဒီအစားအစာစားသုံးမှုထွက်အာကာသဖို့, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအစားအစာများသို့ခွဲထွက်သင့်ပါတယ်။
ဒီမျိုးရိုးကကျန်းမာရေးပြissuesနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်အမြန်စား ထိုကဲ့သို့သောဖောင်းအဖြစ် အကျိုးဆက်အားဖြင့်ပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့၏အင်္ဂလိပ်စာ Labs များကိုအစားအစာများကိုကျွေးသင့်သည်။
မိနစ်များ မိနစ် ၆၀
ဤခွေးများသည်အပြင်သို့ထွက်ရန်အနည်းငယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်တိုင်မိနစ် ၆၀ ခန့်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ဒီမိနစ် ၆၀ လေ့ကျင့်ခန်းကာလကိုတစ်နေ့ကိုနှစ်လမ်းလျှောက်ခြင်း (မိနစ် ၃၀ စီ) ခွဲထားသင့်သည်။ အလွန်ပျော့ပျောင်းသောမျိုးနွယ်ဟုလူသိများသည်၊ သင်သည်စွမ်းအင်အချို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ရန်အတွက်ဆွဲယူနိုင်သည်။
English Labrador Retrievers များသည်သူတို့၏အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအမေရိကန်ဝမ်းကွဲများထက်အနည်းငယ် ပို၍ ပျင်းရိသည်။
တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အခါတွင် Labs သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုရှိသည်ဟုလူသိများသည်။
အကယ်၍ မှန်ကန်စွာသင်ကြားခြင်းမခံရပါက၊ Labradors များသည်သူတို့၏နှာခေါင်း (နှင့်အစာအိမ်) ကိုလိုက်နာသည်ကိုလူသိများပြီးလမ်းလွဲသွားနိုင်သည်
အင်္ဂလိပ်ဓာတ်ခွဲခန်းများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသောအသိဉာဏ်နှင့် trainable ခွေး ။
ဤခွေးတစ်ကောင်သည် ၀ န်ဆောင်ခွေးများအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသည်၊ မျက်စိကန်းသောသူများကိုအခြားဘဝပြောင်းလဲစေသည့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၌ကူညီပေးခြင်းကိုတွေ့ရသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။
TO သို့ အဆိုပါခွေးဂေဟာကလပ်အားဖြင့်ကောက်ယူစစ်တမ်း ဒီမျိုးပွားမှုအတွက်သေဆုံးရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကင်ဆာ၊
English Labrador Retriever အတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်အကြီးမားဆုံးသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်မှာတင်ပါးဆုံရိုးနှင့်တံတောင်ဆစ် dysplasia ဖြစ်သည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဓာတ်ခွဲခန်းသည် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အကြားနေထိုင်လိမ့်မည်။
အင်္ဂလိပ်ဓာတ်ခွဲခန်းသည်ခွေးမျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသော (Labrador မျိုးဆက်ခွဲခြားထားသည့်) ခွေး၏ခေတ်သစ်အမည်ဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့အမေရိကန်ဝမ်းကွဲတွေထက်အနည်းငယ်ပိုလေးတဲ့ English Labradors တွေဟာချစ်ခင်ပြီးသစ္စာစောင့်သိတဲ့ခွေးတွေဖြစ်ပြီးပိုင်ရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။
မကြာသေးမီကခွေးတစ်ကောင်ရခဲ့သော်လည်းသင်သူ့ကိုမည်သို့ခေါ်ရမည်ကိုမသေချာပါလော။ အကြံပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုရှာပါ Labrador ခွေးကလေးအမည်များ။
အောက်ဖော်ပြပါဤလှပသောမျိုးနွယ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အတွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Poodle အမည်များ - Poodles အတွက် 450+ ပြီးပြည့်စုံသောလူကြိုက်များသောနာမည်ကြီး
အကောင်းဆုံး Golden Retriever ရောစပ်မှု ၅၇ ခုကိုသိကျွမ်းလာပါ
charles spaniel bichon ရောနှော